देश र विदेशैभरि बिदा किन
२३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रापति सी चिनफिङले असोज २५ र २६ गते नेपालको भ्रमणमा आए । २५ गते शनिवार भयो, २६ गते सरकारले पाहुनाको स्वागत, उनका् सुरक्षा, यातायातको अप्ठेरोका कारणले सार्वजनिक विदा दियो ।
राष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान गर्न जे जति उपायहरु अवलम्बन गरिएका छन्, त्यो हुनैपथ्र्यो, स्वागत छ चीनका महामहिम राष्ट्रपतिज्यू ।
तर प्रश्न के हो भने, ३ नम्बर प्रदेशलाई विदा दिए हुनेमा देशैभरि बिदा किन दिइयो ? त्यसमाथि विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा समेत बिदाको फर्मान जारी गरियो । यो बिदा दिने र काम गर्नु पर्दैन, रमाइलो गर भन्ने सरकारको तरिका अलि हजम भएन । हामी शान्ति, समृद्धिको खोजीमा छौं र यसका लागि अथक परिश्रम गर्ने स्थितिमा छौं । हामीले अनावश्यक रुपमा बिदा मनाएर बस्ने बेला होइन यो ।
विश्वशक्तिका राष्ट्रपतिलाई राजधानीले हार्दिक स्वागत गर्नुपर्ने हो, गरे, सरकारको प्रयत्नलाई सह्राहना पनि गरे । कतिपय अनावश्यक खर्चका विषयमा समेत प्रश्न उठाएनन् । अव देशमा चीनका राष्ट्रपतिको आगमनले विकासमा गति आउनेछ, इमान र निष्ठा, कर्तव्य र जवाफदेहीतामा बृद्धि हुनेछ, व्यक्तिगत सम्पत्तिको लालसा राख्ने कम्युनिष्ट हुनैसक्दैन भन्ने चीनका राष्ट्रपतिबाट नेपालको नेकपा पार्टी र त्यो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले केही सिक्नेछ भन्ने आशा पनि राखियो ।
यी सब स्वभाविक थिए, अस्वभाविक रुपमा देश र विदेशैभरि बिदा दिएर चीनका राष्ट्रपति खुशी भए होलान् भनेर सोच्न सकिन्न ।
अन्तरमुखी स्वभावका चीनका राष्ट्रपति काममा, त्यागमा, इमानदारितामा विश्वास राख्छन् । चीनमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारवाहीको सिलसिला चलाएका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाली नेताहरुलाई शिक्षा दिएर जानसके ठूलो गुण हुनेथियो । नेपालको प्रगतिका लागि अवसर त दिएका छन्, त्यो अवसर शासन प्रशासनमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेका लागि मूले फुटेजस्तो हुनुहुन्न ।
चीनले अनेक उद्योगहरु खोलिदिएको थियो, त्यो सब बेचेर खायौं । आइन्दा त्यस्तो हुनेछैन भनेर आश्वस्त पार्न सकेको सन्देश अझै आएको छैन । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट नेपालले सिक्ने के ? आडाभरोसा कायम राख्न सकौला ?